Global Voices teny Malagasy » Indonezia : Ady manodidina ny fanànana ara-tsaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Indonezia : Ady manodidina ny fanànana ara-tsaina
Voadika ny 30 Jolay 2018 11:13 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika (fr) i Claire Ulrich, imanoela fifaliana
Sokajy: Indonezia, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2009)
Vao haingana, namoaka ny tatitra isantaonany ny Departemanta amerikana misahana ny varotra (US Trade Representative / USTR) , ny Special 301, fandinihana ny fahamatoran'ireo mpiara-miombon'antoka aminy mba hanombanana indray ny fanajana ny zon'ny fananana ara-tsaina , amin'ny alalan'ireo lalàna isan-karazany ao amin'ny firenena.
Na teo aza ny ezaky ny fanjakana indoneziana mba hamaizana ireo fandikana ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny fanaovana hosoka ireo, nametraka an'i Indonezia ho ao amin'ny lisitry ny fanarahamaso lohalaharana, milahatra akaikin'ireo lehiben'ny mpanao hosoka sy ny fandikana ny zon'ny fananana ara-tsaina toa an'i Shina sy Rosia ny Departemanta amerikana misahana ny varotra.
Felaka ho an'ireo mpisolotena ofisialy an'i Indonezia ny fampidinana ny satan'i Indonezia ho ao amin'ny lisitr'ireo firenena ambany fanarahamaso ao anatin'ny lisitra mainty.
Asehon'ny The Jakarta Globe [amin'ny teny anglisy] ny ahiahin'ny Fanjakana manoloana ity fampidinana ity , amin'ny alalan'ny fanehoankevitr'i Mari Elka Pangestu, Minisitry ny varotra .
Manaisotra ary mamotika CD hosoka marobe etsy sy eroa ny polisy indoneziana, hetsika nasongadina ary nampitaina niaraka taminà dokadoka nataon'ny haino aman-jery tao an-toerana .
Ao an-drenivohitra, Jakarta, misy foana ireo DVD sy CD hosoka. Afaka hita isaky ny 50 metatra any amin'ny faritra malaza ao Jakarta afovoany sy Jakarta andrefana ireo ”mpivarotra mandehandeha an-dalambe”.
Mihevitra i William, ao amin'ny blaoginy Etersoul  [amin'ny teny bahasa] fa tokony hijanona ao amin'ny lisitra mainty i Indonezia.
Inona no hevitro? Holazaiko avo sy mafy fa dia MIOMBON-KEVITRA amin'izany (aho)!! Fa maninona aho no milaza izany? Ny tena izy dia tsy dia tena manaja loatra ny asan'ny hafa ny Indoneziana, (ny antony) angamba mahantra ry zareo raha resaka fahaizana mamorona na maniry ny mba ho voalohany amin'ny lohahevitra iray izy farafahakeliny. Fa tena tsoriko, tsy mino aho fa mahantra fahaizana mamorona (ny Indoneziana), ny tena marina dia maro amin'izy ireo no nitondra hazavana nahazoana tombontsoa teto amin'ity firenena ity. .[…] Na eo aza ireo ezaky ny polisy amin'ny fiadiana amin'ireo fanafody hosoka,DVD, ary ny fanakànana ny fangalarana lahatsoratra aty amin'ny aterineto mihitsy aza, nanomboka tamin'ny niasany tao amin'ny tontolo virtoaly, tsy hahomby mihitsy ny asany raha toa ka mbola hahazo tombony ho an'ny tenany amin'ny fomba tena tsotra dia tsotra ireo mpanao hosoka. Tena mampalahelo.
Mamoaka fandrabirabiana momba ity fampidinana sata ity ny Creativesimo , blaogina vondrom-piarahamonina iray [amin'ny teny bahasa]:
Miarahaba an'i Indonezia ! Taorian'ny namoahany ny lalànany voalohany indrindra mikasika ny vaovao sy ny varotra eletronika izay mandimby ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina, ary taoriana hetsika fanoherana ny fanaovana hosoka mitsitaitaika – sarotra ny hilaza raha ”tetikasa’ fotsiny ireny na hoe tena vonona mihitsy ny fanjakana – voasazy izao i Indonezia. Midina any amin'ny lisitr'ireo firenena ambany fanarahamaso ao amin'ny lisitra mainty ny laharany ! Mitovy sokajy amin'i Rosia sy i Shina i Indonezia ankehitriny raha mikasika ny resaka fandikana ireo zon'ny fananana ara-tsaina. Fa mitovy amin'ny lentam-pandrosoana amin'izyz ireo ve isika raha resaka teknolojiam-baovao ? Mazava ho azy, mbola lavitra any aorianany ! Noho izany, nahoana no miady amin'ireo fandikana ny zon'ny fananana ara-tsaina isika, raha tokony hiady amin'ny tsy fahampiana fanabeazana na ny fahatarantsika amin'ny resaka fampianarana?
Miharihary amin'ny famoronana toerana ho anà Tale jeneralin'ny zon'ny fananana ara-tsaina eo anivon'ny Ministeran'ny fitsarana sy ny zon'olombelona ao amin'ny Repoblikan'i Indonezia ny finiavan'ny fanjakana indoneziana hanafoana ny fanaovana hosoka. Fa mbola marefo ny fahaizan'ny polisy amin'ny resaka fahitana ireo rindrambaiko tratry ny hosoka  [amin'ny teny indoneziana].
Manamarika ny fanokafana ny Akademia indoneziana voalohany indrindra ho an'ny zon'ny fananana ara-tsaina  ity volana Mey ity. Noforonina tamin'ny fiarahana niasa tamin'ny fanjakana japoney ilay sekoly miorina ao Depok, ao Java Andrefana, tamin'ny alalan'ny Sampandraharaha misahana ny Fiarahamiasa Iraisam-pirenenan'i Japana (JICA )..
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/30/123611/
 US Trade Representative / USTR): http://www.ustr.gov/
 fananana ara-tsaina: http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
 ny ahiahin'ny Fanjakana manoloana ity fampidinana ity: http://www.thejakartaglobe.com/home/article/18529.html
 mbola marefo ny fahaizan'ny polisy amin'ny resaka fahitana ireo rindrambaiko tratry ny hosoka: http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/04/16/55/211304/minim-pengetahuan-polisi-sulit-atasi-pembajakan-software
 Akademia indoneziana voalohany indrindra ho an'ny zon'ny fananana ara-tsaina: http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2663&ctid=23&id=2174&type=2